Ebe nchekwa Modsecurity - LinuxCapable
Otu esi etinye ModSecurity 3 & OWASP Core Rule Set na Nginx na Debian 11 Bullseye
Sunday, Jenụwarị 16, 2022 Wednesday, September 1, 2021 by Jọshụa James
ModSecurity, nke a na-akpọkarị Modsec, bụ firewall ngwa weebụ mepere emepe n'efu (WAF). Emebere ModSecurity dị ka modul maka sava HTTP Apache. Agbanyeghị, kemgbe mmalite ya, WAF etoola ma ugbu a na-ekpuchi ọtụtụ arịrịọ Transfer Protocol HyperText yana ikike nzacha azịza maka ọtụtụ…
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Modsecurity, NGINX
Otu esi etinye ModSecurity 3 & OWASP Core Rule Set na Nginx na Rocky Linux 8
Sunday, Jenụwarị 16, 2022 Satọde, Ọgọstụ 14, 2021 by Jọshụa James
ModSecurity, nke a na-akpọkarị Modsec, bụ firewall ngwa weebụ mepere emepe n'efu (WAF). Emebere ModSecurity dị ka modul maka sava HTTP Apache. Agbanyeghị, kemgbe mmalite ya, WAF etoola ma ugbu a na-ekpuchi ọtụtụ arịrịọ Transfer Protocol HyperText yana ike nzacha azịza maka nyiwe dị iche iche dị ka Microsoft IIS, Nginx,…
Categories Nkume linux Tags Modsecurity, NGINX, Nkume Linux 8
Otu esi etinye ModSecurity 3 & OWASP Core Rule Set na Nginx na Ubuntu 20.04
Thursday, January 13, 2022 Wenezde, August 11, 2021 by Jọshụa James
ModSecurity, nke a na-akpọkarị Modsec, bụ firewall ngwa weebụ mepere emepe n'efu (WAF). Emebere ModSecurity dị ka modul maka sava HTTP Apache. Agbanyeghị, kemgbe mmalite ya, WAF etoola ma ugbu a na-ekpuchi ọtụtụ arịrịọ Transfer Protocol HyperText yana ike nzacha azịza maka nyiwe dị iche iche dị ka Microsoft IIS,…
Categories Ubuntu Tags Modsecurity, NGINX, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Sunday, November 14, 2021 Monday, May 31, 2021 by Jọshụa James
WordPress ModSecurity Rule Set (WPRS) bụ AndreaTheMiddle mepụtara. Ọ bụ usoro iwu na-agbatị OWASP CRS a ma ama na nke a na-ejikarị ya na freeware Mod Security 3 WAF mepere emepe. Iwu ndị a bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ nwere nrụnye WordPress dịka a maara nke ọma na ha bụ…
Categories Nkuzi CMS Tags Modsecurity, WordPress